Edito Ho ady sa adilahy ?
Fampandrosoana diso paika ?
Miroso mankany amin’ny fifidianana ben’ny tanàna isika amin’izao fotoana izao. Ny ben’ny tanàna rahateo no sokajiana ho rafitra ara-panjakana akaiky ny vahoaka indrindra, raha ny lalàna sy ny fitsinjaram-pahefana satria hatreto mbola tsy tafiditra ao anatin’ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny fokontany.
Sao dia mba efa kapoka ?
Fito volana nahazoana mpitondra vaovao isika izao, fito volana niovan’ny rivotra politika, fito volana nahenoana fampanantenana samihafa fanampin’ireo efa re tamin’ny fampielezan-kevitra na koa tany amin’ny taona 2009 nilazana fa tonga ny revolisionina lehibe ho an’ny firenena.
Mandroso mihemotra !
Tsy mila mpamatsy vola mahazatra fa mampahantra, avy eo mila mpamatsy vola mahazatra indray !
Mandrehitra afo hatrany!
Demokrasia tahaka ny ahoana no tiana hapetraka eto amin’ny tany sy ny fanjakana ity ?
Edito Miandry demokrasia marina !
Tontosa iny ny fivoriamben’ireo mpanohitra ny fitondrana voalohany sy ny manodidina azy.
Edito Hanova toetsaina !
Mila manova toetsaina isika malagasy. Azo antoka fa farafahakeliny angamba, 58 taona, no nahenoana ny tolo-bahaolana hamahana ny fahasahiranana teto Madagasikara.
Ho avy indray i Dadabenoely!
Manakaiky ny fifidianana ben’ny tanàna, ka efa miomankomana indray ry Dadabenoely hampanjaka ny politikan’ny domina tapany handoa erany.
6 volana mahery taorian’ny nijoroan’ny fitondrana Rajoelina dia manomboka mijoro koa ankehitriny ny rafitra politika rehetra heverina fa lojika ao anatin’ny atao hoe repoblika.
Efa io ny filoham-pirenena, ny praiminisitra, ny governemanta, ny antenimieram-pirenena, ny antenimierandoholona sy izay rantsamangaika hafa rehetra. Singanina manokana ao anatin’izany moa ity resaka mpanohitra sy fanoherana ity. Mampifandrirotra azy io sy ny fitondrana ankehitriny ny fikasan’ny hery an-kavanana, izany hoe, ny mpiaradia amin’ny fitondrana hanolo ny lalàna voasoratra sahady kanefa tsy nampihatra izany akory. Efa mazava moa izany ny ao ambadik’izay fa fikasana hanilika ihany koa ny mpifaninana mivantana tamin’ny filoham-pirenena ankehitriny nandritry ny fifidianana mba tsy ho filohan’io hery hankavia io. ho ady sa adilahy, izany hoe, krizy politika indray no ho vokatr’izao atsy ho atsy ? Hifampiziriziry hahatonga ny vahoaka ho sorona sy ho diso fanantenana atsy ho atsy indray ve sa mba tena hahita fifanarahana matotra ho an’ny tombontsoan’ny olompirenena rehetra ? Fanontaniana heverina fa ilaina hapetraka izany rehetra izany mialoha ny tsy hisiana fanapahan-kevitra mitory fitiavantenan’ireo mpitondra indray na fahefana mpanao lalàna io na mpanatanteraka.